Koox hubeysan oo maanta Sarkaal ku dilay gobolka Banaadir -News and information about Somalia
Home Warkii Koox hubeysan oo maanta Sarkaal ku dilay gobolka Banaadir
Koox hubeysan oo maanta Sarkaal ku dilay gobolka Banaadir
Wararka nagasoo gaaraya degmada Deyniile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayanaa in maanta ay koox hubeysani ay degmadaasi ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada militeriga Soomaaliya,xilli uu ku sugnaa degmadaasi.
Allaha u naxariisto sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdulle waxaana kooxda hubeysani ee dilka geystay ay ku dileen degmada Deyniile gaar ahaan Haanta-Dheer,iyagoona gobta isaga baxsaday dilka kadib.
Dadka deegaanka oo la hadlay warkii.com ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in kooxda dilka gaystay ay ahaayeen labo ruyux oo bastoolado ku hubeysnaa, haybtoodana aan la garanaynin, waxa ay intaa ku dareen in markii ay dilka geysteen kadib ay goobta isaga baxsadeen.
Dilalka noocan ah ayaan ahayn kuwii horeeyay ee ka dhaca gobolka Banaadir iyo deegaannada ku xeeran,ma jirto ilaa iyo hadana cid sheegatay masuuliyada dilkan maanta ka dhacay degmada Deyniile ee gobolka Banadaadir.
Previous articleMW Farmaajo oo sharaxaad ka bixiyay xaaladda & Go’aankiisa doorashada 2021
Next articleWasiir Maareeye oo war ka soo saaray khilaafka ka dhexeeya Agaasimaha Hobolada Waaberi iyo Maareeyaha Tiyaatarka Qaranka
Yaa ka Dambeyay qaraxii lagu dhamaday ee maanta ka dhacay Muqdisho...